NgokweNgxelo zabaThengi, okwangoku yeyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso yiGPS S8 | Iindaba zeGajethi
Namhlanje akukho mntu umangalisiweyo kukuba kuphela yi-Samsung kunye ne-Apple kuphela kweenkampani ezihlala kwisiphelo esiphakamileyo sefowuni yefowuni. Uninzi luzamile njenge-LG, u-Sony kumaxesha akutshanje kuGoogle ngeGoogle Pixel, isiphelo esingakhange sabonwa ngaphandle kweUnited States kwaye okwangoku kubonakala ngathi izinto azizukutshintsha. IiNgxelo zabaThengi ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo okhusela iimfuno zabemi ukongeza ekwenzeni iingcebiso ezahlukeneyo zabasebenzisi Banokukhuseleka xa bethenga izinto, nokuba z-elektroniki okanye naluphi na olunye uhlobo.
Ngokwengxelo yayo yamva nje, okwangoku yeyona smartphone ibalaseleyo sinokuyifumana kwintengiso yiGPS S8 kunye nomntakwabo omdala i-S8 + imi ngaphezulu kwe-Apple kunye ne-iPhone yayo ye-7 Plus eneekhamera ezimbini. Phakathi kwamanqaku aqinisekileyo anikezelwa yingxelo yabathengi yakutshanje, sifumana uyilo olubonakalayo ngaphambili apho phantse yonke into isiscreen, kubandakanya amacala kunye nobomi bebhetri phakathi kwamanqaku abalulekileyo.
Into ebonakala ngathi le ntlangano engenzi nzuzo ayithandi kwaphela yimeko yesenzwa somnwe, abantu abaninzi abayithandi, kuba ibabeka ecaleni kwekhamera endaweni yezantsi kwayo, ke kuphephe ukuthambisa iilensi zekhamera ngalo lonke ixesha sivula isiphelo sendlela. Umncedisi wesiqingatha, uBixby ukwimiba emibi yesi sigxina.
Kucacile ukuba La manqaku mabini amabi afunyenwe yi-Samsung ye-S8 ayenokuthinteleka ngokululaUkusukela ukuba i-Bixby ayifumaneki, eyona nto intle ibikukuba ulinde iinyanga ezimbalwa kwaye uyazise ngeNqaku 8 okanye kwisizukulwana esilandelayo. Inzwa yeminwe, asazi ukuba yintoni eya kube iwele iingqondo zabaqulunqi, kodwa ngethamsanqa le nto ayisosizathu saneleyo sokungathengi i-terminal.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikwazise nge I-smartphone yokuqala enokufikelela kwimarike ngenzwa yeminwe edityanisiweyo phantsi kwescreen. Esi siginali senziwe yiVivo, iya kuba (ukuba ithiwe thaca kungekudala) indawo yokuqala enale teknoloji, kuba zombini i-Samsung kunye neApple bacwangcisile, ngokwamarhe onke, ukuyiphumeza kuzo zombini iNqaku 8 kunye ne-iPhone 8, umiliselo endandinokuyenza ngaphambili kodwa kubonakala ngathi ayisiyiyo kuphela ibinengxaki yokusebenza, kodwa ikwanazo neengxaki zokusebenzaokoko isantya sokuvula sicotha kakhulu xa kuthelekiswa nezivamvo zangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » NgokweNgxelo zabaThengi, eyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso kungoku nje yiGPS S8